China chisimudziso fekitari uye bhizimisi | Qian Iye
Ichi chigadzirwa is pulley
Ichi chigadzirwa chinomhanya zvakanyanya pulley yemhando dzakasiyana dzemotokari
Iyi injini yemota chikamu che1900 rpm kumhanya kwazvo.
Yakagadzirwa kubva ku303 simbi isina simbi uye ine nhema E-kupfeka.
Inoderedza yepakutanga pulley dhayamita uye inowedzera iyo turbocharger kutenderera Angle ne9.5%.
Iyi crank pulley yemhando dzakasiyana dzemotokari.
Yakagadzirwa kubva Kumhando yepamusoro yealuminium alloy, anodized, lighter kupfuura iyo yekutanga fekitori.
Yakagadziridza hupamhi hwepakutanga pulley, zvakare, yakawedzera iyo turbocharger kutenderera kumhanya kwe15.4%.
Iko shanduko mukubatanidzwa kwepuru uye diki pulleys inogona kuwedzera kumhanya kweyekutanga michina supercharger neinosvika ku26.4%, ichienderera nekuvandudza bhiza uye torque.
Iyo Lighweight Aluminium Crank Pulley yemhando dzose dzakashongedzwa.
Yakagadzirwa kubva ku6061 Aluminium, iyo Lightweight Crank Pulley ihombe, ine hupfumi hwehuremu kusunungura imwe yekuwedzera bhiza kubva kwauri magetsi chirimwa. Yakagadzirirwa kutora kushungurudzwa kwetraffic nemugwagwa, iyo Motorsports Lightweight Crank Pulley inogadzirisa nyaya zhinji dzinotambudza mamwe crank pulley pamusika.
Zvinhu zvakadai izvo zvakanangwa zvakanangana nekugadziriswa pamusoro pezvimwe .... zvakafanana .... aruminiyamu crank pulley iri pamusika:
Yakagadzirirwa kusangana neSAE zvirevo maererano nekushambadzira kweBelt Grooves.
Yakagadzirirwa KUSA kutsemuka kana kutadza - Vazhinji Aftermarket Aluminium VQ pulleys anotsemuka kana anogona kutadza kutenderedza yepulley kumeso semhedzisiro yematanho akanyanya evanogadzira anotora kuchengetedza uremu.
Yakakura, iri nyore kuverenga machined Timing Mamaki
Yakawedzera bhanhire kukwirira kwefudzi - Kubatsira kudzivirira mabhandi kubva pakusvetuka kana kusarongeka.
0% Underdriven kudzivirira chero nyaya neiyo fekitori Mhepo Inodzora, Alternator kana Simba Simba.
Inochengetedza kushandiswa kweOEM Bhandi - Hapana chikonzero chekushushikana nezvekuyedza kurangarira kana kutsvaga kuti ndeipi bhandi rakakosha raunoda iwe mota!
Kuwedzera kupindura kweTrottle - Mhedzisiro yakananga yekubvisa yakawandisa kutenderera uremu kubva kune crankshaft / driveline.
Ndokumbira uve nechokwadi chekusarudza yakakodzera kupedzisa pazasi. Iwe unogona zvakare kusarudza kuwedzera ITSVA seti yeOEM Nissan Mabhandi pamutengo wakasarudzika wepakeji zvakare. Ive neshuwa yekusarudza rakakodzera gore kubva pane sarudzo. Kana uchisarudza mabhandi iwe unogona ikozvino kusarudza kuwedzera iyo YEMAHARA OEM Idler Pulley Kubvisa Spacer uye rakakodzera bhandi.
Pashure: Dogbone Gomo Insert
Zvadaro: Base Gomo